OSGEAR UW1200 USB WIFI Wireless WLAN Card Drivers for Windows Mac Linux Download | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဧပြီလ 23, 2019 မောင်းသူ မောင်းသူ, networks, OSGEAR ပံ့ပိုးမှု, ကြိုးမဲ့စက် 0
OSGEAR ကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု – UW1200 Series
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. ယာဉ်မောင်းသူသာနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ RealTek များအတွက် download, ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည် / Qualcomm မှ software များ.
မော်ဒယ် Apply: U30W1200 / U30W1200ANT / UW1200ANTBT
OSGEAR ကြိုးမဲ့ Wi-Fi Software များအဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုသည်, အဆင့်မြင့်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်.
Windows ကို Mac အတွက် Linux ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် OSGEAR UW600 ကို USB WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်း
Atheros BlueTooth BT Card Drivers for Windows XP Vista78 10 Software ကိုဒေါင်းလုပ်
မိုဘိုင်းဖုန်း device ကိုမော်ဒယ် HTC က Nokia က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စီပီယူ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Technology_Internet 64-နည်းနည်းက Windows နည်းပညာ Software များ processor ​​ကို ပရိုဆက်ဆာ Samsung က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု OS ကို-STORE Intel က ဥပဒေရေးရာအနက် HD Graphics